I-BD/Ibhafu etofotofo engaqhakamshelaniyo nomntla wedolophu - I-Airbnb
I-BD/Ibhafu etofotofo engaqhakamshelaniyo nomntla wedolophu
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguHeather
Xa iyi-221 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
I-COVID-19: I-Lysol isetyenziselwa umphezulu kunye nokusetwa kwe-sanitize kwiwasha / isomisi. Kusetyenziswe ibhokisi yokutshixa iqhosha. Kufuphi neDowntown/Duke/RTP, igumbi lakho lokulala elipholileyo labucala kunye negumbi lokuhlambela lifumaneka ngokulula nje ngeekhilomitha ezi-5.6 emantla e-Main St kwindawo enoxolo. Sibhetyebhetye ngamaxesha okufika nawokuhamba. Iindwendwe ezimbini zinokuba nawo omabini amagumbi okulala nge-$5 ngaphezulu. Siziikhilomitha ezi-6 okanye imizuzu eyi-15 ukusuka kwikhampasi yaseDuke yaseMpuma, kwaye sihamba imizuzu engama-20 ukusuka eDuke Chapel. UNC Chapel Hill's 30 imizuzu emazantsi. Sinekati enye yokukhulisa abantwana kumgangatho ophantsi
Uluhlu lwegumbi lokulala elinye, kunye nokukhetha ukongeza elinye igumbi. Ixabiso elibonisayo lelegumbi elinye lokulala, kodwa unokucela amagumbi okulala omabini nge- $5 eyongezelelweyo ngobusuku ukuba ziindwendwe ezi-2 ziphelele. Ukuba kukho iindwendwe ze-3-4, ngoko izinga lihlaziya ngokuzenzekelayo kwaye libandakanya zombini amagumbi okulala. I-loft inefriji encinci kunye nekomityi enye umenzi wekofu onokwenza i-pods okanye ikofu ephantsi. Simalunga neekhilomitha ezintlanu kumntla weMain St.
I-wifi ekhawulezayo – i-221 Mbps
4.93 out of 5 stars from 642 reviews
4.93 · Izimvo eziyi-642
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi642
Siyabuthanda ubumelwane bethu kuba kuvakala ngathi "sikude" kodwa siyimizuzu eli-10 kuphela ukusuka kubuphithiphithi bolonwabo edolophini yaseDurham. Ikhampasi yaseDuke yaseMpuma yimayile ezi-6. I-Main St imalunga neemayile ezi-5. Ubumelwane buneendlela zokuhamba okanye zokubaleka kwaye iPenny's Bend ikufuphi kuhambo lwendalo.
Siyayithanda iDurham kwaye ziyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo/izalathiso/iingcebiso. Kukho iindawo ezintle zokutyela kunye neendawo zokuhlala zangaphandle. Okwangoku iimaski ziyafuneka kwilizwe laseNorth Carolina ngaphakathi ukuba awugonywanga. Sonke siya kugonywa ngokupheleleyo ukususela nge-12 kaMeyi.
Siyayithanda iDurham kwaye ziyafumaneka kuyo nayiphi na imibuzo/izalathiso/iingcebiso. Kukho iindawo ezintle zokutyela kunye neendawo zokuhlala zangaphandle. Okwangoku iimaski ziya…